Feedhayahanka Muslimka Ah Ee Khabib Nurmagomedov Oo Lagu Cadaadinayo In Uu Dagaallamo Xilli Khatar Loogu Jiro Coronavirus | Laacib.net
Feedhayahanka Muslimka Ah Ee Khabib Nurmagomedov Oo Lagu Cadaadinayo In Uu Dagaallamo Xilli Khatar Loogu Jiro Coronavirus
March 22, 2020 Abdiwahab Ahmed Comments Off on Feedhayahanka Muslimka Ah Ee Khabib Nurmagomedov Oo Lagu Cadaadinayo In Uu Dagaallamo Xilli Khatar Loogu Jiro Coronavirus
Dunida oo dhan waxay ku hawlan tahay sidii ay u kala dheeraan lahayd, isla markaana aanay u dhici lahayn in dad badan ay meel iskugu yimaaddaan, sidoo kalena waxa looga digay dadka in aanay isa-salaamin, istaabannin amaba aanay isku jirsanin meel neeftoodu isgaadhi karto.
Dadka caabuqa Coronavirus u dhintay waxay ku dhow yihiin 15,000 qof, waxaana u jiifa in ka badan ku dhowaad 200,000 ruux.
Sidaas oo ay tahay, maamulka ciyaaraha dagaalka ah ee UFC, waxay ku cadaadinayaan feedhyahanka Muslimka ah ee Khabib Nurmagomedov inuu la dagallamo dhiggiisa Toni Ferguson badhtamaha bisha April ee innagu soo aaddan.
Dagaalka miisaankiisa loo yaqaano UFC 249 ayaa dhex mari doona Khabib Nurmagomedov iyo Tony Ferguson, waxaana ballantiisa la qabtay ka hor intii aanu Coronavirus dillacin ay ahayd 19 April.
Garoonka caanka ah ee ku yaalla magaalada New York ee waddanka Marayka ee Brooklyn’s Barclays Center ayaa loo qorsheeyey inay labadan nin ku dagallamaan, hase yeeshee waddankaas ayaa waxa uu joojiyey inay dad ka badan 10 qof meel iskugu yimaaddaan, sidoo kalena waxa albaabada loo laabay dhamaan tartamadii kala duwanaa, waxaana fasax la geliyey NBA, MLB, NHL iyo kulamadii feedhka.
Madaxweynaha maamulka UFC, Dana White ayaa shaaciyey in iyaga aanay xayiraadaha iyo khatartani saamayn ku yeelan doonin marka laga yimaaddo dhinaca garoonka martigelinaya ciyaarta, waxaanu ku adkaystay in Khabib iyo Tony ay dagaallami doonaan.
“Waanu u hoggaansamaynaa awaamiirta ah in toban qof ka badan aanaan hal qol iskugu keenin, waxaananu rajaynaynaa in tani dhamaan doonto ka hor bisha April, dagaalkuna wuxuu dhici doonaa, waana waxa aanu samayno toddobaad walba dhamaadkiisa.” Ayuu yidhi Dana White.
“Taageereyaasha ayaa doonaya inay arkaan, dagaalyahannaduna waxay rabaan inay dagaallamaan. Wiilashanna waxay doonayaan inay sii wadaan.” Ayuu raaciyey.
Warbaahinta tebin doonta dagaalkan ayaa iyadana ay saamayn ku yeelan doontaa xayiraaddu, maadama ay wariyeyaasha iyo duubeyaashu khatar u geli karayaan inay xanuunka qaadaan ama gudbiyaan, waana arrin uu Dana qirsan yahay.
“Way caddahay inaanu dhibaato kala kulmayno warbaahinta tabin doonta, balse waxaanu rabnaa inaanu sii wadno oo dagaalka Khabib-Tony uu waqtigiisa ku dhaco.” Ayuu mar kale yidhi.
Si kastaba, waxa jira dalabyo loo soo jeedinayo madaxweynaha UFC, Dana White oo ku aaddan in la baajiyo dagaalkan oo muddo dib loo dhigo, si ay daawadeyaal badan u iman karaan garoonka, isla markaana dunidu si habboon uga daawan karto telefishannada, taas oo ah sida kaliya ee UFC ay ku heli karayso dhaqaalaha ay rabto inay kasoo xarayso dagaalkan, isla markaana ay Khabib iyo Toni ku siin karaan lacagta ay kula heshiiyeen.